Zvigadzirwa fekitori - China Zvigadzirwa Vagadziri, Vatengesi - Chikamu 7
Slurry Pump Impeller-147-P03 Yaobang Slurry Pump Impellers ari 100% anochinjaniswa neAH slurry pump Winclan fekitori Tinonakidzwa nesimba rakasimba tekinoroji, zvigadzirwa zvakaisvonaka uye akakwana ekuongorora zviridzwa, kuti tikwanise kukupa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nemakwikwi mutengo. Taura nesu Nezvedu / Nheyo yedu yakanaka mhando, munguva yekutakura, mutengo unonzwisisika. Kubva kutanga kudiki muna 2004, Winclan Pump yakura kuva ...
Slurry Pump Impellers-147-R08 Yaobang Rubber Slurry Pump Impellers inochinjika neRubber Slurry Pumps Chinyorwa: 1. R08 iblack yakasviba yerabha, yepasi kusvika pakati nepakati kuomarara. R08 inoshandiswa kune impellers uko kwakanyanya kuputika kwekushomeka kunodiwa mune yakanaka particle slurries. Iko kuomarara kweR08 kunoita kuti iwedzere kupokana kune ese ari maviri chunking kupfeka uye kuwedzera (kureva: kuwedzera kunokonzerwa nemauto ecentrifugal) zvichienzaniswa neR26. R08 inowanzo shandiswa chete kune vanoteedzera. R26 ...
Vhara Slurry Pump Impeller-147-A05 Yaobang Slurry Pump Impeller ari 100% anochinjaniswa neAH, HH, SP uye G akateedzana slurry mapombi. Slurry Pump Impeller Chinyorwa 1. A05 ipfekero inodzivirira chena simbi iyo inopa yakanakisa kuita pasi pemamiriro ezvinhu. Iyo alloy inogona kushandiswa zvinobudirira mune dzakasiyana siyana slurry mhando. Iyo yepamusoro yekupfeka kuramba kweiyo alloy A05 inopihwa nekuvapo kweyakaomarara carbides mukati mayo micro-chimiro. Chiwanikwa A05 inonyanya kukodzera kuappl ...
Huro Bush-083 Yaobang Slurry Pump Huro Bush ane 100% anochinjaniswa neAH uye G akateedzana mapombi. Slurry Pump Throat Bush Chinyorwa: 1. A05 isimbi inopfeka chena chena iyo inopa kuita kwakanakisa pasi pemamiriro ekukuvadza. Iyo alloy inogona kushandiswa zvinobudirira mune dzakasiyana siyana slurry mhando. Iyo yepamusoro yekupfeka kuramba kweiyo alloy A05 inopihwa nekuvapo kweyakaomarara carbides mukati mayo micro-chimiro. Chiwanikwa A05 inonyanya kukodzera kune maficha apo munyoro cor ...
Chimiro Plate Liner Insert-041 Slurry Pump Frame Plate Liner Isa 100% inochinjaniswa neSlurry Pumps. Slurry Pump Furemu Plate Liner Isa Nyaya 1. A05 ipfekero inodzivirira chena simbi iyo inopa yakanakisa kuita pasi pekukuvara mamiriro. Iyo alloy inogona kushandiswa zvinobudirira mune dzakasiyana siyana slurry mhando. Iyo yepamusoro yekupfeka kuramba kweiyo alloy A05 inopihwa nekuvapo kweyakaomarara carbides mukati mayo micro-chimiro. Alloy A05 inonyanya kukodzera kunyorera ...
Kavha Plate Liners-018 Yaobang Rubber Furemu Plate Liner uye Cover Plate Liner vari 100% kuchinjaniswa neAH Rubber Slurry Pumps. Chinyorwa: 1. R26 idema, yakapfava yakasikwa rabha. Iyo ine yakakwirira kukukurwa kwevhu kushora kune zvese zvimwe zvinhu mune yakanakisa PARTICIPLE slurry mafomu. Iyo antioxidants uye antidegradents anoshandiswa muR26 akagadziridzwa kusimudzira hupenyu hwekuchengetedza uye kudzikisira kudzikisira panguva yekushandiswa. Kukwirira kwekupokana kweR26 kunopihwa nekubatanidzwa kwayo ...
YW Submersibel Sewage Pump YW dzakateedzana dzinonyudza pombi dzeseji dzinogadzirwa nekambani zvichibva mukumwa kweyemhando yepamusoro matekinoroji anoshandiswa kugadzira senge zvigadzirwa.Iine zvakanakira kushanda kwakanyanya, kudzivirira ichitenderera, hakuna kuvhara, otomatiki coupling, kuvimbika, uye kushandisa otomatiki mukati Pamusoro pezvo, inosanganisira yakasarudzika maficha maererano nekubvisa solid solid uye refu fiber fiber. Aya mapombi anouya madhaimendi e50-600mm, iine kuyerera kweye 10-70 ...
<< <Yapfuura 234567